Political Archives - Page 210 of 210 - Yangon Media Group
အမ်းမြို့နယ်တွင် ဆူပူအုံကြွမှု ပြုလုပ်ပေးရန် ငွေကျပ်ငါးသိန်းပေးစည်းရုံးစေခိုင်း ခံထားရသူ??
မကွေး၊ စက်တင်ဘာ ၂၆-ရခိုင် ပြည်နယ် အမ်းမြို့နယ်တွင် ဆူပူအုံ ကြွမှုများပြုလုပ်ပေးရန် ငွေကျပ် ငါးသိန်းပေးကာ စည်းရုံးစေခိုင်းသူ တစ်ဦးကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တွင် တွေ့ရှိထားသည်ဟု မကွေး တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက် တာအောင်မိုးညိုက ပြောသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး...
ဗဟိုရွှေဈေးကွက်ဖော် ဆောင်ရာတွင် လောင်းကစားဈေး ကွက်ကဲ့သို့မဖြစ် စေရေးအထူးဂရုစိုက်ရန် ရန်?
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆-ဗဟို ရွှေဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရာတွင် လောင်းကစားဈေးကွက်တစ်ခုကဲ့ သို့ဖြစ်မသွားရန် အထူးဂရုစိုက် ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်း သိန်းက သတိပေးပြောကြားလိုက် သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်က ရန် ကုန်မြို့ရှိSummit Parkviewဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်သည့် မြန်မာ...
ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမားများ၏ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များသေဆုံး ရမှုဖြစ်စဉ်ကို ကမ
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၆-ARSA အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်သမား များ၏ သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် သေဆုံး ခဲ့ရသည့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်ရုပ်အ လောင်းများနှင့်ဖြစ်စဉ်ကို ကမ္ဘာမှ သိရန် နိုင်ငံတကာသံတမန်များ၊ မီ ဒီယာများကို ဖိတ်ခေါ်ပြသရှင်းလင်း မည်ဟု လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ် ရေးနှင့်...
ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ ဘဝမေ့ပြီး တာဝန်မကျေဟု ဦးဝင်းထိန်ပြော
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၃-အစိုးရ သစ်၏တစ်နှစ်ခွဲကာလအတွင်း NLDကိုယ်စားလှယ်အချို့မှာ ဘဝ မေ့ပြီး လုပ်ငန်းတာဝန်မကျေကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ အတွင်း ရေးမှူးအဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းထိန်ကပြော ကြား လိုက်သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက် ဗဟန်း...
မြန်မာ-ထိုင်းနယ် စပ်သုံးနေရာတွင် ပတ်စ်ပို့ရုံးသစ်များဖွင့်မည်
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၃-မြန်မာ- ထိုင်းနယ်စပ်သုံးနေရာတွင် မြန်မာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံး သစ်များ ထပ်မံဖွင့်လှစ်မည်ဟု သိ ရသည်။ ထိုင်းအစိုးရ၏ရွှေ့ပြောင်းအ လုပ်သမားများ ခရီးသွားကင်းလွတ် ခွင့်အဖြစ် ဖမ်းဆီးမယ့်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း အလုပ်သမားများ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို နယ်စပ်တွင်...
တောင်ကိုရီးယားရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးရှေ့တွင် အစိုးရကိုထောက်ခံကြောင်း မြန်မာ ၂ဝဝဝ ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖေ
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄-ရခိုင်ပြည် နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရကို ထောက်ခံကြောင်း တောင်ကိုရီးယားရှိ ကုလသမဂ္ဂရုံးရှေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂ဝဝဝ ကျော် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသည်။ စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက် တောင်ကို ရီးယားစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၂ နာရီခန့်တွင်...
Page 210 of 210 Prev 1 … 209 210
မြဝတီမြို့တွင် ညီအစ်ကိုချင်း အရက်အတူ သောက်ပြီး စကားများရာမှ ဓားထိုးမှုဖြစ်
မွေးရာပါ နားမကြား ကလေးငယ်များအတွက် အတွင်းနား အစားထိုးခွဲစိတ်ခြင်းကို ထည့်သွင်း လုပ်ဆောင်သ
ပြင်သစ် အလှဆုံး အမျိုးသမီးအဖြစ် ဖော်ပြခံရတဲ့ Audrey Tautou
Game of Thrones ဇာတ်လမ်းတွဲ အဆုံးသတ်တော့မည်ကို စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ မင်းသမီး မီဆီဝီလီယမ်
အမေ့ကို လူတွေ မုန်းပါစေ